Ụgbọ okporo ígwè a na-ejighị ụgbọ mmiri na-abịa n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Australia - RayHaber
Homeụgbọ okporo ígwèUsoro okporo ụzọ okporo ụzọỤgbọ okporo ígwè a na-ejighị ụgbọ okporo ígwè esi n'Australia
21 / 09 / 2018 Levent Ozen Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Oceania 0
ugbua a na-achoghi akwa yuk na-agba n'Australia
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri a na-azụghị na Disonport, Tasmania, Australia, magburu onwe ya ma gbochie ọdachi ọ bụla.
Dị ka ndị uweojii Tasmania si kwuo, ụgbọ okporo ígwè a na-ejighi achịkwa, bụ nke na-enweghị njide, na-amanye n'apịtị ahụ dị nso na Devonport ma kwuo na a ga-enwe ọdachi ọ bụla.
Onye uweojii bụ onye uweojii bụ Stuart Wilkinson kwuru na ụgbọ okporo ígwè ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-aga ngwa ngwa banyere 50 kilomita na elekere.
Ç O doro anya na oge ahụ dị oké egwu, "ka Wilkinson kwuru. Ụgbọ okporo ígwè ahụ na-aga Devonport na ọ dị mkpa ịkọrọ ndị bi na ụgbọ okporo ígwè ahụ na-aga ebe ahụ. N'ụzọ dị mwute, otu nwanyị nke na-eje ije n'okporo ụzọ site na mpempe akwụkwọ na-egbugharị ụgbọ ala ahụ kwuru na ụmụ nwanyị abụọ merụrụ ahụ.
Turkey Mbụ humanoid robot Factory Ị akin Soft mpi ụwa 25 / 08 / 2018 Na Konya, a software ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ubi nke robotic technology "AKINSOFT", Turkey mbụ humanoid robot n'ichepụta ụlọ ọrụ malitere mmepụta. 2 700 puku square mita na ngụkọta, gụnyere ime ụlọ mmepụta ihe ike 11 puku square mita "akınrobotics" usoro a na-amị. Ígwè ọrụ, na-akwalite ngwaahịa na shopping malls, ekesa fliers na fairs, bọs ụgbọ ma ọ bụ na ọdụ ụgbọelu na nduzi na ụlọ ahịa na ụlọ Shopkeepers, n'ụlọ ọgwụ, ọgwụ na-ekesa, ala ọnọdụ na-ebu igwe nke elu 10 n'arọ ka kwesịrị ekwesị, sensọ enịm ke screening-ele anya na-eme, ọtụtụ ihe, dị ka esetịpụ ihe mgbaru ọsọ ọ nwere ike ime. AkınRobotics Motors, ngwanrọ na mmepụta, gụnyere ihe niile bụ ụlọ na mba. Ruo ugbu a, prototype dị nso na 30 Bugün
Ụgbọ okporo ígwè na-azụ Gbanyụọ okporo ígwè 30 / 01 / 2014 Ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ na Adanada: N'ihi ụgbọ mmiri ụgbọ okporo ígwè na-eru nso n'akụkụ District Karaisalı nke Adana, ụgbọ okporo ígwè ahụ emechila. N'ihi nkedo nke ụgbọ okporo ígwè nke dị nso n'Ógbè Karaisalı nke Adana, ụgbọ okporo ígwè ahụ emechila. Ndị njem 600 nọ n'ụgbọ okporo ígwè n'otu ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè Pozanti na-ezigara Adana na ụgbọala dị iche iche. Na 13.00, ụgbọ ala ụgbọ okporo ígwè, nke dị na larịị ụgbọ okporo ígwè Pozantı-Yenice, dị na Bucak Village nke Karaisalı District. Ọ dịghị onye gburu ma ọ bụ merụọ ahụ merenụ. Ọ bụ ezie na ebugo n'akụkụ akụkụ nke ụgbọ ala ahụ adalata, e mechiri ụgbọ okporo ígwè maka ụgbọ njem
Ụgbọ okporo ígwè na-azụ ụgbọ okporo ígwè na Kars 29 / 07 / 2014 Na Kars, ụgbọ okporo ígwè na-akwagharị: n'ime ógbè Sarıkamış, ụgbọ ala 3, bụ nke debiri ụgbọ okporo ígwè ụgbọ mmiri, kwaturu. Dika ozi ndi natara, ugbua 3 nke ugbo ugbo ugbo site na Erzurum rue Kars abiala na ebe acısu maka ihe kpatara ya. Mmebi mebiri site na nkedo nke 3 wagon na wayo na ígwè. Uzo okporo ígwè Erzurum-Kars n'ihi ihe mberede ahụ mechiri. Emeela ka ọrụ ahụ maliteghachi ụzọ. Ka ọ dịgodị, njem Ankara-Kars n'etiti Eastern Express n'ihi ihe mberede na Erzurum, a kpọgara ndị njem na Kars na ụgbọ ala ahụ.
Ụgbọ mmiri na-ebugharị ụgbọ okporo ígwè 22 / 12 / 2014 Kol ebu ibu ụgbọ oloko derails: abụọ na-azụ nke Sivas Divriği district nke Erzurum coal ibu-ebu ụgbọ okporo ígwè Aşkale District derailed. Ọ bụ ezie na ihe mberede ahụ emerụghị ahụ, ụgbọ oloko ahụ akwụsịla. Ihe omume ahụ mere na 01.30 n'ọkwá İliç, Erzincan, nke dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Bağıştaş. The coal agba Eruzurm SÝVAS Divriği district na district Aşkale, ome machiini Elijah Aslan Mba 45326 12 oge ochichi nke abụọ n'ụgbọala ibu ụgbọ oloko na-agbakwa ụgbọ agha derailed. Mgbe ụgbọ oloko ahụ kwụsị n'etiti Erzurum na Erzincan kwụsịrị n'ihi ihe mberede ahụ, amalitere ịmalite ọrụ ọzọ. N'aka nke ọzọ, a na-akpọ ọnụ ọgụgụ ndị njem nke Eastern Express na nọmba İstanbul
Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè na Düziçi (Video) 01 / 01 / 2016 Ibu ụgbọ oloko derails na düziçi: Düziçi district nke Osmaniye, 4 ugbala n'ọkwá nke ihe efu ibu ụgbọ oloko derailed. Ọ dịghị onye nwụrụ ma ọ bụ merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ. Mberede, dabere na-asị ụnyaahụ na 20.00 ka Akçakoyunlu Village Train Station Yarbaşı mere ke bi Suspension Bridge. State Demiryoları nke 63059 njem Mba ome machiini Aaron 49-ụgbọ ala ibu ụgbọ oloko na birder ochichi, İslahiye Fevzi Pasha direction si Iskenderun nke Hatay district mgbe gara na ntụziaka dị ka a n'ihi nke exiting ụgbọala xnumx'ünc n'ihi mmejọ na ụgbọala 24 n'ụgbọala n'akụkụ dina si na track. 4 ụgbọala efu ụgbọ oloko nke Mamure na ngwa 24 siri ike ...
Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ mmiri na Sivas 11 / 01 / 2016 Na Sivas, ụgbọ okporo ígwè na-akwagharị. N'ihi mkpofu nke ụgbọ ala 3 nke ụgbọ okporo ígwè na mpaghara Kangal nke Sivas, ụgbọ njem agaghị ekwe omume na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Sivas-Malatya. Dị ka ozi natara, ugbua 43303 mbụ nke ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè 3 na-ebu ígwè site na district Divriği nke Sivas ruo Malatya, bụ nke e debere na obodo Kalkım maka ọnọdụ doro anya. Mmebi nke ụgbọ ala mere n'ihi ihe mberede ahụ, ụgbọ okporo ígwè okporo ígwè Sivas-Malatya mechiri maka njem. Ọrụ malitere imeghari
Ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ na Zonguldak 19 / 02 / 2016 ibu ụgbọ oloko derailed na Zonguldak: Zonguldak coal na Turkey, alụmdi na a ibu ụgbọ oloko derailed. Ndị ọrụ si ebe ahụ malitere ịzọpụta ọdụ ụgbọ oloko na ìgwè Zonguldak maka ụgbọ okporo ígwè ụgbọ ala. Ma ihe egwu ahụ atụghị egwu. Dị ka ọmụma nwetara, otu n'ime ụgbọ okporo ígwè nọ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ahụ nọ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ndị òtù ahụike na ndị uweojii 112 gara ebe ahụ mgbe ihe mberede ahụ gasịrị. Ọ dabara nke ọma gburu ma ọ bụ merụọ ahụ na mberede, mgbe ebu pụta, ọ na-mụtara na ibu ụgbọ oloko bụ Turkey Kol Institution. Ndị otu TTK si na ebe ahụ maka ndị ọrụ nnapụta ahụ malitere ọrụ. Ndị nche na gburugburu ebe obibi Emniyet
Ụgbọ okporo ígwè na-apụta na Yozgat 05 / 08 / 2016 Yozgat Freight Train Derailed mmepụta: Yozgat Yerköy ebu efu mmanụ ụgbọala tank ka a n'ihi nke nkwatu nke ụgbọ oloko si n'ụgbọala Yerkoy 7-Ankara e mechiri na okporo ígwè iga. Dị ka ozi nwetara, na shapes Yerkoy obodo nke district nke na-asị, Yerköy, na-efu mmanụ ụgbọala na-eduga na deformation 13 364 puku mgbe ọ nọ n'ụgbọ okporo ígwè xnumx si gbanwee ọnọdụ nke kpukwara e ji ebu ihe derailed 19. N'ihi mkpọgharị ụgbọ ala ahụ, ụgbọ okporo ígwè 7 na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè mebiri emebi. Mgbe ihe mberede ahụ gasịrị, ndị gendarmerie na ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ n'ebe ahụ. N'ihi ihe mberede ahụ, ụgbọ okporo ígwè Yerköy-Ankara mechiri maka ụgbọ njem. Mgbe ha rụzigharịrị ụgbọ okporo ígwè ndị mebiri emebi nke ụgbọ okporo ígwè otu
Ụgbọ njem ụgbọ okporo ígwè si Elazığ 20 / 03 / 2017 E debere ụgbọ okporo ígwè Elazig: Ụgbọ okporo ígwè na-enye Elazig derailed n'ihi nkedo. N'ụzọ dị mma, ọ dịghị onye e gburu ma ọ bụ merụọ ahụ. Emere ala na Beyhan Sureven, ebe ụgbọ okporo ígwè si na Tatvan district nke Bitlis ka Elazığ na-agafe. Ọ bụ ezie na ụgbọ ala nke ụgbọ okporo ígwè ahụ kwụsịrị, ọ dịghị ohere ịnwụ ma ọ bụ ọnwụ. Dị ka akụkọ akụkọ Habertürk, Xantan, X-TRX-Elazığ si gaa njem ụgbọ okporo ígwè 53027 ụgbọ mmiri Beyhan Suveren 122 derailed n'ihi nkedo. E ji ụgbọ mmiri na-adọkpụ ụgbọ mmiri ahụ na-adaba n'ihi ala ahụ mere mgbe ụgbọ okporo ígwè ahụ si n'olulu ahụ pụta. Ihe mberede ahụ emeghị na mberede
Ụgbọ mmiri ụgbọ okporo ígwè na Mexico 5 nwụrụ anwụ 19 / 01 / 2018 Na Mexico, mgbe ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ, otu n'ime ụgbọ ala ahụ dara n'ụlọ ahụ ma 5 furu efu. Na a na nkwupụta si Ministry of Transport, Ecatepec, nso isi obodo nke Mexico, na-ekwu na derail a ibu ụgbọ oloko na-ebu ọka, n'ihi nke nkwatu na a ulo nso otu ụgbọ okporo ígwè ugbala e dere dị ka enwekwaghị ya 5 ndụ mmadụ. Ọ bụ ezie na amaghi ihe kpatara ihe mberede, nchọpụta ahụ gara n'ihu.
Ụzọ njem maka ịnyịnya ígwè malitere
IMM maka nlekọta ụlọ akwụkwọ
Turkey Mbụ humanoid robot Factory Ị akin Soft mpi ụwa
Ụgbọ okporo ígwè na-azụ Gbanyụọ okporo ígwè
Ụgbọ okporo ígwè na-azụ ụgbọ okporo ígwè na Kars
Ụgbọ mmiri na-ebugharị ụgbọ okporo ígwè
Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè na Düziçi (Video)
Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ mmiri na Sivas
Ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ na Zonguldak
Ụgbọ okporo ígwè na-apụta na Yozgat
Ụgbọ njem ụgbọ okporo ígwè si Elazığ
Ụgbọ mmiri ụgbọ okporo ígwè na Mexico 5 nwụrụ anwụ